Centrifuge Nkata, Magnetic Nkewa Drum - ume
Aha: Ọrụ poul Function ...
Arọ ụlọ ọrụ ịgbado ọkụ mmiri
Aha: Arọ ụlọ ọrụ weldm ...
Aha: Magnetik nkewa ...
Function: Ji Mining E ...
Arọ ụlọ ọrụ machining mmiri
Function: Jiri ya ...
Aha: Centrifuge nkata Fu ...
Aha: Drive Doo Function ...
Function: Ji Mining ...
Anyị ahụwo ndị ọkachamara ịgbado ọkụ nke maara nke ọma na ọkọlọtọ mba (DIN ọkọlọtọ, AS ọkọlọtọ / JIS ọkọlọtọ / ISO ọkọlọtọ…), yana usoro nyocha nchọpụta ọkachamara.
Mkpebi / 21/2020
Oge Ememe Mmiri nke China dị nso, Johan na Jason si Australia na-efe efe ebe a. N'oge ọkọchị n'Australia ugbu a, ha na-eyi uwe elu dị mkpụmkpụ n'ime akwa ha. ha na-ewetara anyị ezigbo obi ụtọ, ọ bụ nnukwu ọrụ! N'ime ụbọchị atọ ha nọrọ ebe a, anyị tụlere n'ụzọ zuru ezu a ...
Na-atụghị anya ya, 2020 bụ afọ pụrụ iche, COVID-19 na-agbasa n'ụwa niile site na mmalite nke afọ. Ndị China niile biri ememme mmiri na-adịghị jụụ, ha anaghị eri nri ma ọ bụ zụọ ahịa, enweghị ndị enyi na-ezute ma ọ bụ ndị ikwu. Ọ bụ ihe dị iche iche na mbụ！ N'ihi Chin ...
2020 bụ afọ na-amị mkpụrụ maka Stamina, olee otu ọ dabara
Anyị mechara nnukwu ọrụ ahụ site na Australia n'oge, ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ mgbakọ ha ugbu a. Ha weputara anyi oru ohuru dika nkea n’enweghi obi abua otutu ubochi gara aga, ha ajujughi ajuju obula gbasara anyi, tuoro anyi ihe osise ahu. Ọ dịkwa drum, ma nke ọkara cylinder, m ...